Namhlanje lolona suku lude enyakeni, i-solstice yehlobo 2017 | Iindaba zeGajethi
UJose Alfocea | | I zi ganeko
Ngokunokwenzeka uninzi lwenu lucinga ukuba intloko yam ihambile kancinci ukuba ndiyakuxelela Ihlobo liqale namhlanje, kodwa inyani kunye nenyaniso ecacileyo kukuba kunjalo, ubuncinci ngokusemthethweni.
Nangona besele sinengxaki yesihogo sobushushu iiveki, ngakumbi kwisiqingatha esisemazantsi peninsula (ndibhala ndisuka eMurcia, ke unokucinga), Namhlanje lolona suku lude enyakeni kwaye ke obona busuku bufutshane; Ingaba u Ihlobo laseSolstice, inqaku elibonisa ukungena kweli xesha lonyaka. Ngeli xesha ufunda oku, ihlobo sele liqalisile.
1 Ithetha ntoni i-solstice yehlobo 2017?
2 Usuku lwemibhiyozo
3 Ubushushu obushushu kakhulu
Ithetha ntoni i-solstice yehlobo 2017?
Unyanisile. Njengoko bendikuxelele ekuqaleni kwesi sithuba, I-solstice yehlobo yenzekile namhlanje, ngoLwesithathu nge-21 kaJuni ngo-6: 24 kusasa (Ixesha lePeninsular kunye neyure enye kwiiCanary Islands), ngokwezibalo ezenziwe yiNational Astronomical Observatory. Kwaye oku kuthetha ukuba namhlanje lusuku olukhulu kuba lusuku oluneeyure ezininzi zokukhanya konyaka, lolona suku lude, kunye nobona bufutshane ubusuku, ke kufanelekile ukuba ubusele ucinga malunga nokuba ungazisebenzisa njani iiyure ezininzi yokukhanya, ukongeza ukunyamezela iiyure zomsebenzi ezichukumisayo. Kodwa yintoni i-solstice yehlobo ngokwenene?
Igama "solstice" livela kwelesiLatin "sol" (iLanga) kunye "sistere" (ukuhlala uzolile), kwaye libhekisa "kwindawo yokungahambi kwelanga". Rhoqo ngonyaka ngalo mhla Ukufiphala kwenkwenkwezi yokumkani kuphawula eyona ndawo isemantla, ukuhlala kubude obufanayo emini kangangeentsuku ezininzi, yiyo loo nto ibizwa ngokuba yi "solstice". Kodwa namhlanje kuyakuba xa iLanga liphawula eyona ndawo iphezulu esibhakabhakeni, kwaye oku kuthetha ukuba isithunzi sayo nayiphi na into iya kuba ne-longitudinal ye-null kulo mgca, yiza, ujonge umthunzi ukuba upholile uzakuba nzima namhlanje emini.
Ke, i-solstice yehlobo liphawula ukuqala kwexesha elitsha, ihlobo, elibonakaliswa ngokuba lelona lishushu kunyaka, nangona kuphela kwi-hemisphere esemantla yeplanethi Umhlaba ke xa sihamba sisuka kwi-ikhweyitha sisiya kumazantsi ehlabathi, kuqala isigaba esibandayo. Ke ngoko, kwi-hemisphere esemazantsi "indawo ebusika" iyaqhubeka, hayi eyehlobo.
Ngendlela, Ihlobo lelona xesha lide enyakeni. Kungenxa yokuba kwezi ntsuku usuku lwe-aphelion lwenzeka, Oko kukuthi, umhla apho umhlaba kunye neLanga zikude enye kwenye, yiyo loo nto uMhlaba uhamba ngesantya esikhawulezayo. Yiza, njengathi, ubushushu buyamchaphazela kwaye "kunzima" kuye ukuba aqale ukuhamba.
Ngokwesiko, i-solstice yehlobo ibisoloko ingunobangela wokubhiyozela, kwaye abantu baye baqhuba imithendeleko emininzi kunye nezithethe, ezinje ngesiko Ubusuku baseSan Juans ukuba siza kubhiyozela kwiintsuku ezimbalwa kwaye sinomlilo kunye nemililo njengeyona nto iphambili.
Iingqungquthela zaseSan Juan ePlaya de San Juan, eAlicante
I-solstice yehlobo ikwalilixesha ngokwesiko elinxulunyaniswa ne ukumanyana komntu nendalo eyinxalenye yayo, Ngumhla wokuchuma, wesivuno. Ukusukela ukuba izithethe ze-Stone Age zibhiyozelwe malunga noku. Umzekelo olungileyo woku yiStonehenge, eNgilane, indawo apho kusenziwa khona izithethe zokubhiyoza.
Ubushushu obushushu kakhulu
Kwaye ukuba ucinga ukuba ekuqaleni ndikhalaze kakhulu kwaye akushushu kangako, kuya kufuneka uyazi loo nto Kulo nyaka kulindelwe ukuba kushushu ngakumbi kunesiqhelo, ngakumbi kwiindawo ezisemaphandleni usingasiqithi, apho ubushushu bunokuba phakathi kwe-1,5 kunye ne-2 degrees ngaphezulu komndilili. Oku kungenxa yokuba indawo ezisemaphandleni usingasiqithi zikude nomoya obhudlayo wolwandle, into esoloko ithambekele ekuthobeni amaqondo obushushu; Ngapha koko, eSpain, isiqwenga seentaba eziselunxwemeni siyakugxininisa ngakumbi ukwahlulwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I zi ganeko » Namhlanje lolona suku lude enyakeni, ihlobo lasehlotyeni ngo-2017
Iwizards, iZombi, iiGenius, iiEves, iiVampire zezinye zeemojis ezingama-69 eziza kufika kungekudala kwiselfowuni
Ukulinda kuphelile, i-OnePlus 5 ngoku isemthethweni